Barcelona Oo Isku Dayday Inay Ousmane Dembele Ka Iibiso Manchester City Xagaagii Hore.
HomeWararka CiyaarahaBarcelona oo isku dayday inay Ousmane Dembele ka iibiso Manchester City xagaagii hore.
November 11, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay isku dayeen inay ka iibiso Ousmane Dembele Manchester City xagaagii lasoo dhaafay, si kooxda Catalan ka dhisan iskugi daydo in uu yareeyso dhibaatada dhaqaale.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Faransiiska ayaan weli heshiis cusub u saxiixin Camp Nou, taasoo la micno ah, sida uu hadda yahay, inuu xor u yahay inuu kala hadlo heshiis horudhac ah oo uu la galo kooxaha kale bisha Janaayo.
24-sano jirkaan ayaa kaliya hal kulan u saftay Barcelona xilli ciyaareedkan, isagoo ka soo kabsaday dhaawac jilibka ah oo uu kasoo muuqday kulankii Dynamo Kiev ee dhacay 2-dii November ka hor inta uusan soo gaarin dhaawac muruqa ah.
Manchester United iyo Juventus ayaa labaduba la rumeysan yahay inay si dhow isha ugu hayaan horumarka, iyadoo Dembele laga yaabo inuu beeca xorta ah ku helo sanadka soo socda.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay TV3 , Man City ayaa wadahadalo kula jirtay ciyaaryahanka ku guuleystay Koobka Adduunka sannadkii hore.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Aymeric Laporte iyo Raheem Sterling ay ka wadahadleen sidii ay ku heli lahaayeen Dembele, laakiin kooxda La Liga ayaa dooneysay heshiis lacag ah oo toos ah, kaasoo aan xiiso u qabin kooxda Pep Guardiola .
Tababaraha cusub ee Barcelona Xavi ayaa sheegay in uu aad ugu baahan yahay xiddiga reer France in uu heshiis cusub u saxiixo Camp Nou markii wax laga waydiiyay isaga intii lagu jiray furitaankii Isniintii.